Wednesday September 18, 2019 - 14:59:45 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa waxaa uu magaalada DHuusamareeb kulan kula qaatay hoggaanka ugu sarreeya Ururka Ahlu Sunna ee Magaaladaas maamulayay.
Madaxweynaha ayaa madaxda Ahlu Sunna ee uu la kulmay ku bogaadiyay dadaalka iyo halganka ay u galeen in degaannada ay ka taliyaan ka celiyeen AL-shabaab.
Waxaa kale oo uu Madaxeynuhu ku bogaadiyay sida Ahlu Sunna oga qeybqaadatay dhismaha Maamulka Galmudug ee uu hadda dhismahiisa ka socda Magaaladaas.
Ahlu Sunna ayaa Magaalada DHuusamareeb ku wareejisay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya kaddib markii heshiis ay la saxiixdeen Ra’isalwasaare Kheyre ay Ciidankoodii ku wareejiyeen laguna daray ciidamada dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa kulankaas kaddib ka baxay Magaalada Dhuusamareeb waxaana uu Magaalada Newyork ee dalka Mareykanka uga qeybgeliyaa shirka Golaha guud ee Qaramada Midoobey.